Xisbiga Jamhuuriga oo halis ugu jira inuu xisbi kale ka dhex abuurmo
Saraakiil horey xilal usoo qabtay oo ka tirsan Xisbiga Jamhuuriga, kuwaasi oo u arka xisbiga inuusan dooneyn inuu ka horyimaado Donald Trump iyo isku dayga uu ku waxyeeleynayo dimoqraadiyadda Mareykanka, ayaa ku guda jiraa wada-hadallo ay ku dhisayaan xisbi cusub oo siyaasaddiisa tahay midig-dhexe, sida ay xubno arrintan xog ogaal u ah u sheegeen Reuters.
Qorshaha ayaa ah inay meelaha qaar ka sharxaan musharaxiin tartama, halka tartamada qaar ay taageerayaan musharaxiinta siyaasadda midigta-dhexe, haddii ay noqon lahaayeen Jamhuuri, Dimoqraadi iyo kuwa madax-banaan, sida ay dad xog ogaal ah u sheegeen Reuters.
Evan McMullin, oo ahaa madaxa siyaasadda Jamhuuriyiinta Aqalka Wakiilada, sidoo kalena 2016 si madax-banaan isugu sharxay madaxweyne, ayaa Reuters u sheegay inuu wax ka marti-geliyey kulanka ay yeesheen saraakiil ka walaacsan sida Trump ula wareegay xisbiga Jamhuuriga.
McMullin ayaa sheegay in 40% dadkii ka qeyb-galay wada-hadallada ay taageereen dhismaha xisbi cusub. Kuwa kale ayaa soo jeediyey inaan la dhisin xisbi balse la sameeyo garab ka dhex-shaqeeya xisbiga Jamhuuriga ama banaanka.